Midowga Yurub oo isku raacay in la bur buriyo Doomaha ay adeegsadaan dadka wax Tahriibiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Midowga Yurub oo isku raacay in la bur buriyo Doomaha ay adeegsadaan dadka wax Tahriibiya
24th April 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Madaxda Midowga Yurub ayaa isku raacay in la bur buriyo doomaha ay adeegsadaaan dadka wax tahriibaha, kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgium, iyagoo ka hadlayay sidii wax looga qaban lahaa qul qulka dadka Tahriibayaasha ee Yurub u soo tallaabaya.
Dalal badan oo ka tirsan Midowga Yurub ayaa maraakiib iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ku deeqay, si ay uga qeyb qaataan howl galada ka dhanka ah doomaha ay adeegsadaan dadka wax tahriibiya.
Hogaamiyeyaasha Midowga Yurub ayaa ku heshiiyay in la-laba jibaaro dhaqaalaha lagu bixinayo howl galada bad baadinta ee Badda Mediterranean-ka, waxaana ay isla garteen in laga hortago dadka tahriibayaasha ee isku dayaya inay Yurub u soo tallaabaan, iyaga oo ka soo tagaya waqooyiga Afrika.
In ka badan 800 oo ruux ayaa todobaadkan ku dhintay Badda Mediterranean-ka, kadib markii doomo ay ka soo raaceen Xeebaha Libiya, waxaana tani ay sii murjisay walaaca Midowga Yurub ka qabo qul qulka dadka sida sharci darada uga soo gudbaya Badda.
Talyaaniga oo ah halka ugu badan ee ay soo maraan Tahriibayaasha ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in arrintan iskaashi laga sameeyo, isla markaana wada jir looga hortago doomaha soo qaada tahriibayaasha.
Tallaabada ayaa qeyb ka ah in doomaha la bur buriyo, ka hor inta aanay ka soo shiraacan ama aysan soo qaadin Tahriibayaasha.
Somali Football Association calls for troops to leave Somali stadium
Nabadoon lagu dilay magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan